Nhau - Amino Acids Tangisa
Muvhuro-Svondo: maawa makumi maviri nemana
Amino Acid Mafetiraiza
Chii chinonzi amino acids?
Amino acids ndizvo zvinhu zvekutanga zvinoumba mapuroteni, uye ari makemikari makemikari umo maatomu ehydrogen paacarbon maatomu e carboxylic acids anotsiviwa nemapoka eamino. Amino acids inogona kugadzira mapuroteni epanyama, pamwe neamine-zvine zvinhu senge mahormone, antibodies, uye creatine. Uye zvakare, amino acids inogona zvakare kushandurwa kuita makabhohaidhiretsi nemafuta, kana yakanangana neakisijeni kune kabhoni dhayokisaidhi nemvura, uye urea inogona kuburitsa simba. Ukasadya zvakanaka kwenguva yakareba, unozotambura nekushaya chikafu zvinovaka muviri uye kushaya simba kwekudzivirira muviri. Kana muviri wakanyanya kupera simba mushure mekuvhiyiwa. Mune ino kesi, mamwe maamino acids anogona kujowa kusimudzira kudzoka kwemuviri.
Makumi maviri amino acids zvinoreva glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, methionine (methionine), proline, tryptophan, serine, tyrosine, cysteine ​​Acid, phenylalanine, asparagine, glutamine, threonine, aspartic acid, glutamic acid, lysine, arginine uye histidine. ndiwo mapuroteni anoumba muviri mupenyu chikamu chikuru.
Maitiro ekuwedzera akakosha amino acids?
Kutanga, chengeta chikafu chakasiyana. Ndokunge, kusanganisa uye kudya akasiyana maprotein echikafu kuti uwane mhedzisiro yekuwedzeredza kushomeka kweamino acid muzvikafu zvakasiyana, kuitira kuchengetedza zvakakwana uye zvakaenzana amino acid protein protein.
Chechipiri, dzivisa kuwandisa kwemafuta. Zvikafu zvine mapuroteni zvakanyanya zvinowanzova zvine mafuta akawanda. Nekuti vanhu vemazuvano vanodya mapuroteni emhuka akawanda uye vanoita maekisesaizi zvishoma panguva imwe chete, chikafu chine mafuta akawanda chinogona kukonzera zvinokanganisa hutano. Naizvozvo, pakusarudza mapuroteni chikafu, sarudza zvikamu zvine zvakaderera zvemafuta zvemukati uye nyore kunwa nemuviri wemunhu, uye dzivisa kuwandisa kwemafuta kudya. Vanodya zvinovaka muviri vanopatsanura nyama yemhuka kuita nyama tsvuku uye nyama chena. Nguruve, nyama yemombe, uye gwayana ndezve nyama tsvuku, nehuku nehove zviri zvemuchena nyama. Kazhinji kutaura, kukosha kwehutano hwenyama chena kwakakwirira kupfuura iyo yenyama tsvuku.
Chechitatu, sarudza yemhando yepamusoro amino acid zvinovaka muviri zvinowedzera. Nekuda kwekumhanyisa kwehupenyu hwevanhu vemazuvano, kudya kuri nyore kwemazuva ese, uye kuderera kweprotein kugaya uye kunwa nekuda kwekukwegura kana chirwere chisingaperi chemuviri wemunhu, zvinowedzerwa zvakakodzera zveamino acid zvinovaka muviri zvine zvese zvakakosha amino acids kune muviri wemunhu unosimudzira chikafu cheamino acids uye mapuroteni. Chiyero chehutano hwevanhu chakakosha zvikuru.